HALKAAN KA AKHRISO W.W MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER 15-DEC-2019
Sunday December 15, 2019 - 09:23:46 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxweyne Farmaajo Oo Shalay Daa hfuray Manhajka Waxbarashada Dalka Ee Dugsiga Hoose Iyo Dhexe Madaxweynaha JF/Soomaaliya Md. Ma xamed Cabdullaahi Farmaajo oo daah-fu ray Manhajka Dugsiyada Hoose iyo Dhexe ee dalka ayaa tilmaamay in Dowladda
Madaxweyne Farmaajo Oo Shalay Daa hfuray Manhajka Waxbarashada Dalka Ee Dugsiga Hoose Iyo Dhexe Madaxweynaha JF/Soomaaliya Md. Ma xamed Cabdullaahi Farmaajo oo daah-fu ray Manhajka Dugsiyada Hoose iyo Dhexe ee dalka ayaa tilmaamay in Dowladda ay ka go'an tahay dib u soo nooleynta, mide ynta iyo tayeynta nidaamka waxbarasho ee dalkeenna. Madaxweynaha ayaa manhajkan ku daahfuray Dugsiga Maxamuud Mire ee M/ Muqdisho, iyada oo loo qoondeeyey in ay ka faa'iideystaan arday kor u dhaafaysa 300,000 oo wax ka barta 915 iskuul oo ku yaalla Gobollada dalka. Madaxweynaha ayaa muujiyey muhii madda uu leeyahay manhaj mideysan iyo waxbarasho tayo leh oo ay helaan da' yarta Soomaaliyeed oo 30-kii sano ee la soo dhaafay wax ku baranayey manaahij qalaad oo kala duwan. "Waxbarashadu waa xuquuq aasaasi ah, qof walba oo caruurteenna ka mid ah na ay tahay in uu helo. Waa waajib dastu uri ah in aan u diyaarinno ubadkeenna Soomaaliyeed waxbarasho iyo mustaqbal wanaagsan." Madaxweynaha ayaa sheegay in diya arinta, daabacaadda iyo hubinta manhajk an ay tahay shaqo waddani ah oo bilow ilaa dhammaad ay qabteen khuburo Soom aaliyeed, taas oo muujinaysa kartida iyo aqoonta bahda waxbarashada iyo dib u soo kabashada dalkeenna. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bugaagta manhajka u qey biyey ardayda wax ka barta Dugsiga Maxa muud Mire, isaga oo wax ka weydiiyey dhi gaalka iyo casharrada manhajka, kulana dardaarmay in ay ilaaliyaan. DF/Soomaaliya ayaa tan iyo sanadkii 2017-kii waxa ay saddex laabtay qoonda da miisaaniyadda waxbarasho ee dalka oo horey u ahayd 0.67, iyada oo haatan la ga arsiiyey ku dhawaad 10% miisaaniyadda guud ee dalka.
Gudoomiyaha gobolka Bari oo eedeeyn u jeediyay dowladda dhexe
Cabdisamad Yuusuf Maxamed Gu doomiyaha gobolka Bari ee maamulka Pu ntland ayaa ku eedeeyay dowl ada dhexe ee Soomaa liya in aysan wax garg aar ah gaarsiinin dadka ay saamee yeen roobab kii dhawa an ka da’ay dega ana da maamulka Puntland.
Gudoomiyaha wa xaa uu sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya Punt land ka hortaagan tahay in Shacabkeeda la caawiyo, isagoo sheegay in Bakhaaro ku yaalla Muqdisho ay ka buuxaan Gu rmadkii loogu tala galay Shacabka.
Waxaa uu xusay in wixii Caalamku u gu soo dhiibay dowladda Soomaaliya dad ka Soomaaliyeed ay isku koobt ay,islamarkaana aysan ogoleyn in ay dad keeda Caawiso.
Gudoomiyaha ayaa xusay in Puntland aysan kasoo horjeedin in la caawiyo Shac abka ku dhibaateysan Gardafuu oo inta badan Wadooyinkii go’ayeen Roobab ka da’ay degaanada maamulka Puntland.
Shacabka Puntland ayuu ka codsaday in ay Ogaadaan Hagardaamo uu sheegay in ay ku heyso DF/ Soomaaliya.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Feder aalka Soomaaliya Md.Maxamed Cab dul laahi Farmaajo ayaa kulan wada tashi ah la qaatay Guddiga Qa ran ee Dha b-u-heshiisi in ta iyo Wa dahadallada Dowladda Federaalka iyo Somaliland.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in howl gelinta Guddigan iyo shaqooyinka ay qabteen muddadii koobneyd ee ay mag acaabnaayeen ay muujinayso sida ay uga go’an tahay dowladda hor u socodsiinta qorshaha Qaran ee lagu xoojinayo wada shaqeynta iyo hirgelinta jawi kalsooni iyo horumar loo dhan yahay.
Madaxweynaha ayaa xasuusiyey Gud digan in laga sugayo xal waara oo miro dhal ah, horseedana qorshe Qaran oo ku wajahan tabashooyinka walaalaheenna Somaliland, si loo xaqiijiyo mabaadi’deen na wadajirka ah ee ku dhisan talo wadaag ga, wadaniyadda iyo isku duubnida.
Dhankooda, Xubnaha Guddiga Qaran ee Dhab-u-heshiisiinta iyo Wadahadallada Dowladda Federaalka iyo Somaliland ay aa Madaxweynaha la wadaagay xogta ay ururiyeen muddadii la soo dhaafay ee ku saabsan fursadaha muuqda ee ka miro dhalinta dhab u heshiisiinta ay guddigu u xilsaaran yihiin iyo caqabadaha ku xeeran.
Ilmo yar oo 9 bilood jiray ayaa ku dhin tay ,laba carruur ah oo kalena waa ku dhaawa cmeen kadib markii uu dab qabsaday hoyg ooda oo ku yaa lla xaafadda libaaxyada ee magaaladda Hargeysa, sida ay xaqiijiyeen ciidamada dab damiska Somaliland, qaybtooda Mag aaladda Hargeysa.
War qoraal ah oo kasoo baxay taliska ciidamada dab-da miska Somalila nd ee Hargeysa ayaa na u qornaa sidan:-
alle ha ugu shafe eco waalidood il mo yar oo sagaal bilood jiray ayaa ku dhin tay, halka laba kalena iyagoo dhaawaca cii danka dab-demiska Hargeysa ka soo sa matabixiyeen hoygooda oo dab ku qa bs aday xaafada libaaxyada ee Hargeysa.
Labadii kale oo kala ahaa wiil iyo gab adh ayaa ciidanka dab-demisku gaadhs ii yeen cisbitaalka weyn ee magaalada har geysa halkaas oo hadda lagu daaway nayo.
carruurtan yar yar ayaa waalidkood du sha kaga sii xidheen, iyadoo waliba ilmaha yar ee dhintay lugta uu ka sii xidhnaa.
Ciidanka NISA oo dad ku qabqabtay howlgal gaar ah
Ciidamada Nabadsugida iyo Sirdoonka Soomaaliya ee ka ho wlgalla Gobolka Ge do ayaa howlgallo waxaa ay ka sameey een deg mada Balad Xaawo iyo tuuloo yin hoostaga, iy aga oo howlgalkaas ku soo qabtay dad farabadan.
Taliyaha NISA ee G/Gedo oo howl gal ka hoggaaminayey ayaa sheegay in how lgalka lagu soo qabtay dad lidi ku ahaa am niga,kuwaas oo isugu jira Xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo kuwo ka Ganac sanayey Maandooroyaha Xashiishka.
Sidoo kale waxaa degmada Balad xaa wo lagu soo bandhigey rag lagu eedeeyey inay ka Ganacsanayeen maandooriyaha Xashiishka,kuwaas oo howlgalka lagu qab tay,waxaana taliyaha Nabadsugida Gobo lka Gedo uu sheegay inay howlgalka sii wadi doonaan.
Degmada Balad Xaawo ee Gobolka Gedo ayaa waxaa ay kamid tahay deg mooyinka mararka qaar ay ka dhacaan fal alka Amni darro,waxaana horay loogu dilay dad ay Nabadoono ku jireen.
Heshiis horudhac ah oo laga gaaray Colaadii bariga Mudug
Waxaa Heshiis Hor dhac ah Laga gaa ray Colaadii ka dhex taagneed Bulshada Degaanada To wfiiq iyo Afbar waaqo oo ka tir san G/Mudug halkaas oo dha waan ay ku dag aalameen bee lo walaalo ah.
Taliyaha Ciidamada Dhulka Gen: Abdi xamiid iyo Saraakiisha Taliska 21-aad oo uu horkacayo Taliyaha Qaybta Gen: C/Ca siis Abdulaahi ” Qooje” ayaa Shalay goobj oog ka noqdey isgacan saarka odayaasha 2da dhinac taasoo hormuud ka ah heshiis dhaxal gal ah oo qorshuhu yahay in dho waan la gaaro
Tilaabadan ayaa tusaale u ah sida bul shada deegaanku diyaar ugu tahay ka gud bida colaadaha daashadey iyo in ciidama da ay Ku gacan siinayaan howsha qaran ee nabadeynta.
Cudurro Ka Dhashay Deegaanno Uu Fatahaad Ka Sameeyay Wabiga Shabeelle
Maamulka Degmada Mahaday ee Go bolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay in ay cudurro ka dhasheen fatahaadda We biga Shabeelle ee mara tuulooyimka Hoo syimaada Degmadaas oo kal hore ku soo butaacay xaafado ka mid ah magaalada.
Guddoomiye ku-xigeenka Arrimaha bul shada Degmada Mahadaay Mudane Saa lax Fuleel Xaaji oo la hadlay Radio Mu qdisho ayaa hoosta ka xariiqay in xaalado nafaqi darro ah ay ka jirto magaalada, isagoo intaa ku daray in weli xaafado ka mid ah magaalada ay biyo fadhiisad noq deen.
"Degmada xaaladeeda hadaan kaaga sheekeeyo, runtii biyaha weli waxa ay ku dhex jiraan xaafadaha degmada iyo tuu looyinka hoosyimaada, cuduro kala duwan ayaana ka dhashay oo ay ugu horeyso Nafaqi darro iyo Malaria, mana jirto wax gumad ah oo naga soo gaaray dowladdda Goboleedka Hirshabeelle iyo tan Fede raalka.” Ayuu yiri Saalax.
Guddoomiye ku-xigeenka Arrimaha bul shada Degmada Mahadaay ayaa sheegay in Webiga Shabeelle uu ku fatahay mag aalada iyo tuulooyin kale oo hoostaga De gmada Mahadaay, iyadoo dadku aysan he ysan Hooy iyo adeegyada kale ee aas -aasiga u ah nolosha beni’aadamka.
Saalax Fuleel Xaaji ayaa hay’adaha sa mafalka, Madaxda Hirshabeelle iyo dowladda Federaalka ka codsaday inay gurmad deg deg ah la soo gaaraan dadka ku dhibaateysan magaalada Mahadaay iyo deegaannada kale ee hoostaga.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Oo Baaq U Diray Odayaasha Dhaqanka Galmudug
Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Feder aalka iyo dib u heshiisiinta ee Xukuuma dda Soomaaliya ayaa dar dargelineysa dhismaha Galmudug loo dhanyahay.
Wasiirka arrimaha Gudaha Mudane Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in ay ka go’antahay dhismaha Dowlad Gobol eedka Galmudug oo ay u dhanyihiin dha maan bulshada ku nool deegaannada Gal mudug ayna diyaariyeen qorshayaashii lagu dhameystiri lahaa arrintan.
Wasiirka ayaa xusay in heshiiska lala galay Ahlusunna Waljamaca uu qeyb w eyn ka qaadan doono dhameystirka dhis maha Galmudug, ayna sugayaan in beel aha ay soo dadajiyaan hannnaanka loo wajahayo dhismaha maamulka.
"In Hanaankan maamul dhisidda Gal mudug uu horey u dhaqaaqo mar hore ay ay ahayd, balse howshan ayaa ku soo kor ortay oo ay ahayd in meel la saaro, mid, la ga bilaabo Shalay waxaan sii dar darge lineyaa dhismaha maamulka, qorshaha maamul dhisidda dowlad Goboleedka Ga lmudug waxa ay ku xirnaan doonaan sida beelaha ay ku soo fududeeyaan” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha gudaha.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Fed eraalka iyo Dib u heshiisiinta ayaa khami istii ku guuleysatay inay heshiis la gasho culimada Ahlusunna Waljamaaca, kaasi oo ay soo dhaweeyeen Madaxda dowlad da, qeybaha bulshada iyo beesha caalam ka intuba.
Dowladda oo faahfaahisay halka uu maraayo dhismaha maamulka Galmu dug
Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Fed eraalka iyo dib u heshiisiinta ee Xukuum adda Soomaaliya ayaa dar dargelineysa dhismaha Galmudug loo dhanyahay.
Wasiirka arrimaha Gudaha Mudane Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in ay ka go’antahay dhismaha Dowlad Goboleedka Galmudug oo ay u dhanyihiin dhamaan bulshada ku nool deegaannada Galmudug ayna diyaariyeen qorshayaashii lagu dha meystiri lahaa arrintan.
Wasiirka ayaa xusay in heshiiska lala galay Ahlusunna Waljamaca uu qeyb we yn ka qaadan doono dhameystirka dhismaha Galmudug, ayna sugayaan in beelaha ay soo dadajiyaan hannnaanka loo wajahayo dhismaha maamulka.
"In Hanaankan maamul dhisidda Galmu dug uu horey u dhaqaaqo mar hore ayay ahayd, balse howshan ayaa ku soo kor ortay oo ay ahayd in meel la saaro, mid, laga bilaabo Shalay waxaan sii dar da rgelineyaa dhismaha maamulka, qorshaha maamul dhisidda dowlad Goboleedka Ga lmudug waxa ay ku xirnaan doonaan sida beelaha ay ku soo fududeeyaan” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha gudaha.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Fede raalka iyo Dib u heshiisiinta ayaa khamiistii ku guuleysatay inay heshiis la gasho cul imada Ahlusunna Waljamaaca, kaasi oo ay soo dhaweeyeen Madaxda dowladda, qeybaha bulshada iyo beesha caalamka intuba.
Odayaasha degmada Caluula oo shee gay in aan madax furasho laga qaadan markab lagu qabsaday xeebaha Puntland
Kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka socda xeebaha Puntland, ayaa caro xoog an ku abuuray kalluumaysatada Puntland, taasoo keen tay inay kalu umaysatadu wee raraan maraakiibta ka goo shaysa xee baha.
Arrintaan ayaa soo ifbaxday kadib mar kii maalmo kahor kalluumaysato ku sugan degmada xee beedka Caluula ay qa bsad een Markab gan acsi oo ku gooshayay calanka Sarilanka, inkastoo markii dambe lasii daayay.
Odayaasha degmo Caluula ayaa she egay kalluumaysatadii markabkaas qabs aday in aysan doonayn wax madax fura sho ah, laakiin ay ka xanaaqsan yihiin kal luumeysiga sharci darada ah ee ka socda xeebaha dalkooda.
"Kalluumeysatadu waxay markabka u qabsadeen inay muujiyaan cabashadoo da, mana jirto madax furasho ay dalbade en ”ayuu yidhi Cabdiwahab Axmed, oo ka tirsan odayaasha Caluula ee gobolka Gar dafu.
Maamulka Puntland weli kuma guulay san inuu wax ka qabto jariifka lagu hayo xeebihiisa, inkastoo dhowaan ay sheege en inay dacwad ka gudbinayaan maraakiib iyo Doonyo laga leeyahay Iiraan iyo wada mo kale oo jarriif ba'an ku haya kalluunka
Waxaa si weyn loo adkeeyay baraha Kontrool ee laga soo galo xarunta Mada xtooyadda Qaranka wixii ka dambeeyay Weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen Hot eelka SYL oo ku yaalla kasoo horjeedda Madaxtooyadda.
Kooxda weerartay ayaa ku labisnaa dharka Ciidanka, waxaana si weyn loo hu binaya Ciidamada ay wataan Mas’uuliyi yiinta iyo Ciidanka Booliska ee u so cda Xarunta Ciidanka Booliska ee Kuma anda Boolisiya.
Ciidamo dheeraad ah oo ka tira badan kuwii hore ee jooggay goobaha laga soo galo Madaxtooyadda ayaa lagu arkaya go obaha laga soo galo Madaxtooyadda Qa ranka.
Koontaroolada laga galo Madaxtooya da waxaa la ogoleyn inay ka gudbaan illa alada la socota masuuliyiinta qaar ee dow ladda, waxaana lagu amray inay barta Ko ontarool ku reebaan Askarta.
Waxaana Wadooyinka Madaxtooyada soo galo dhooban Askar Farabadan oo Mas’uuliyiintii galay Madaxtooyadda ay uga tageen.
Waxaa kaliya loo ogol yahay in illaaladoo da ay la gudbaan, Wasiirada, Wasiir Ku xi geenada, Taliyeyaasha & masuuliyiinta xil alka Sare haya sidda ay xaqiijiyen goobjo ogayaal.
Maxkamad ku taalla Magaalada Khartuum ee Caasimadda Suudaan ayaa Shalay xukun ku riday Madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Albashiir.
Xarunta maxkamadda waxaa markii ho re harreeyay dibadbaxayaal taageersan Cumar Xasan Al-Bashiir kuwaas oo qeylo billaabay markii uu Garsooraha ku dhawa aqi lahaa xukunka.Waxay ku qeylinayeen in dacwadda ay tahay mid siyaasadeed, ka dibna garsoo raha ayaa amray in ay ka baxaan max kamadda gudaheeda.
Gudoomiyaha Maxkamadda ayaa ku dhawaaqay in Cumar Xasan Al-Bashiir la gu xukumay laba sano oo xabsi ah, ma na la geyn doono xabsi caadi ah, balse wa xaa lagu hayn doonaa xarun dhaqan-celin.
"Maxkamadda waxay dembi ku heshay Cumar Xasan Axmed Al-Bashiir, Maxkama dda waxay go’aansatay in ay u dirto xarun bulsho oo loogu talagalay daryeelka iyo dhaqancelinta oo laba sano lagu hayn doono.” ayuu yiri garsooraha go’aanka gaaray Al-Sadiq Cabdiraxmaan.
Kheyre oo kulan la qaatay dhigiisa Qatar
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda fede raalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali ay aa magaalada Dooxa kula kulmay dhig giisa dowladda Qatar, Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani.
Labada Ra’i isul Wasaare ayaa ka wada hadalay xoo jinta xiriirka labada dal ee walaalaha ah iyo iskaashiga la ba gee soodka ah.
Kulanka uu Ra’iisul Wasaare Khayre la qaatay dhiggiisa Qatar ayaa qayb ka ah kulamo doceedyada uu la qaadanayo qaar kamid ah madaxda ka qayb geleysa ma dasha Dooxa.
Mudane Xasan Cali Khayre oo Shalay ka qayb galay furitaanka Madasha 19aad ee Dooxa ayaa maalinta berri ah khudbad ka jeedinaya madasha Dooxa oo san nadkaan looga hadlayo ajandayaal muh iim ah.
Puntland: Waa nasiib darro weyn in mu caawinadii shacabka Soomaaliyeed ay ku xaraysan yihiin bakhaarada Xamar
Guddoomiyaha gobolka Bari ee dow lad goboleedka Puntland, Cabdisamad Ab waan ayaa dowladda federalka Sooma aliya ugu baaqay mucaawinimada lagu bi xiyo magaca ummadda Soomaaliyeed in dalka oo dhan la gaarsiiyo loona qeybiyo dadka u baahan ee nugul.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in la is kula xisaabtamidoono in gargaarkii shacab ka Soomaaliya loogu talo galay ay ku xar aysan yihiin bakhaaro Xamar kuyaala isl amarkaana dowladda federalka aysan ogolayn in la gaarsiiyo dowlad goboleedya da. waa sida uu hadalka u yidhi.
"Shacabka Puntland waxay idinku taag eerayaan dowlad qaran ahaan, laakiin wax ay idinku haystaan oo taageere ah ma jiraan," ayuu yidhi guddoomiyuhu.
Puntland iyo dowladda federalka ayaa xill igaan waxaa ka dhex taagan khilaaf siyaa sadeed oo saameyn ku yeeshay wada sha qayntii labada dhinac, inkastoo todobaad kii hore raysal Wasaare Kheyre uu dalbay in gargaar la gaarsiiyo gobolka Gardafu oo galay xaalad go'doon ah.
Wasaaradda Gaadiidka oo sheegtay in dib loo soo celinayo xeerkii waddo marista Gaadiidka
Wasaaradda Gadiidka iyo duulista Ha wada ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhawaan la soo celin doono xeerkii gadiidka ee waddo marista,
Wasiirka Maxamed Cabdullaahi Oomaar ayaa sheegay in la dh ameystiray xeerkii wa ddo marista, kaasi oo horey Gadiidka ay u ist icmaali jireen, loona dhinaca bidixda ah
"Isteerinka bidixda ayaa loogu talagalay, marka albaabka la furo qo fka waxa uu ka degayaa dhanka ma rshabiyeediga, meesha ay dadku ku soc daan jidka dhexdiisa ma lagu dejinayo, wa ana midda saxda ah, tan iyo markii uu bur burka dalku dhacay waxaa is badalay ga adiidka dalka la keeno oo isugu jira kuwa isteerin midig iyo isteerin bidix, sharci a yaana ka soo saarnay oo ku soo baxay fa afinta rasmiga ah, waxaa dhiman oo kaliya in la dhaqan geliyo” ayuu yiri Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in xeerkan uu wax badan ka badali doono hannaanka hadda ay gaadiidka u shaqe eyaan, isla makaana sharciga uu u ogol aan doono gaadiidka isteerin bidixda ah inay dalka ka howlgalaan, si loo ilaaliyo xeerka waddo marista gaadiidka.
Dib u soo celinta sharciga waddo marista gaadiidka ayaa meesha ka saari doonto in la adeegsado gaadiidka isteerin midigta ah, kuwaasi oo marka laga degayo ay ha lis ku tahay dadka gaadiidka ka degaya, iyadoo sharcigan uu yahay mid horey u jir ay inta aysan bur burin dowladdii dhexe
Baarlamaanka Hindiya ayaa ansixiyay sharci lagu muransan yahay oo magan gal yo siinaya muhaajiriinta sharci darrada ah ee ka soo jeeda saddexda dal ee Hindiya deriska la ah – Pak istan, Banglad esh iyo Afghanistan – ha ddiiba aysan Musli miin ahayn.
Dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ay aa sheegay in tani ay tahay tallaabadii ugu dambeysay ee dhowr go'aan oo is xiga ka mid ah, kuwaas oo uu hirgeliyay Xisbiga garabka midig ee BJP ee uu hoggaamiyo Narendra Modi.
Mr Modi ayaa talada dalkaasi hayay tan iyo sannadkii 2014-kii. Aqlabiyadda uu dowladda ka haysto ayaana korortay do orashadii guud ee horraantii sannadkan dalkaasi ka dhacday.
Inkastoo caannimada Mr Modi iyo xis bigiisa ee gudaha Hindiya laga yaabo inay korortay, haddana siyaasadaha iyo go'aamadiisa qaarkood ayaa gudaha iyo dibaddaba laga cambaareeyay.
Tallaabooyinkaas waxaa ka mid ahaa inuu hoos u dhigay bulshada laga tirada badan yahay, gaar ahaan Muslimiinta oo 200 milyan oo qof ka ah tirada dadka da lkaas oo gaareysa 1.3 bilyan.
Waa kuwan saddexda go'aan ee muhiim ka ah ee sii huriyana quluubta dadka Musli miinta oo ah bulshada labaad ee ugu bad an Hindiya:
1. Wax ka beddelka Sharciga Muwaad innimada (CAB)
Sharcigan waxaa muddo labo maal mood gudahood ku meel mariyay labada aqal ee baarlamaanka Hindiya, waxaana looga gol-leeyahay in magan galyo lagu sii yo muhaajiriinta sharci darrada ah ee aan an Muslimiinta ahayn ee ka soo jeeda saddexda dal ee Hindiya deriska la ah - Pakistan, Bangladesh iyo Afghanistan.
Iyadoo hadda uu sharcigaas sugayo saxii xa madaxweynaha Hindiya, haddana xisb iga BJP ayaa sheegay in sharcigan uu si degdeg ah dhalashada u siin doono dadka haysta diimaha Hindu, Sikh, Buddhism, Jai nism, Parsi iyo Kiristaanka, kuwaasoo dal alka deriska ah uga soo cararaya in la dhibaateeyo.
Sharcigan ayaa soo gaabinaya mudda da ugu yar ee qofka deggan Hindiya lagu siin karo dhalashada dalkaas, muddadaas oo ahayd 11 sano, waxayna hadda noqon eysa lix sano, balse tani ma quseyso Muslimiinta.
Tallaabadan, oo xisbiyada mucaarad ka ee Hindiya ay u arkeen mid ka dhan ah Muslimiinta, ayaa noqon doonta isbeddel kii ugu horreeyay ee dastuurka Hindiya la gu sameeyo ee quseeya sharciga dhala shada.
Inkastoo dowladda Mr Modi ay wacad ku martay inaysan takoori doonin Mu slimiinta ayna sheegeen inay ku badbaa dayaan Hindiya, ayaa haddana kooxaha Muslimiinta iyo kuwa u dooda xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in tani ay ta hay tallaabadii ugu dambeysay ee lagu dhi baateynayo 200 oo milyan oo qof oo Muslimiin ah oo ku nool Hindiya.
Sharcigan ma saameynayo muwaaddi niinta Hindiya - sida Hinduuga, Muslimiinta iyo kuwa diimaha kale haysta - balse wux uu caawin doonaa boqollaal kun oo muha ajiriin Hindu ah oo ka yimid Bangladesh isla markaana Hindiya u yimid si ay u helaan dhalasho.
Tani waa sababta gobollada waqooyi-bari Hindiya ay uga socdaan dibadbaxya da ballaaran ee sharcigan cusub looga soo horjeedo, iyagoo ka walaacsan in gob olladooda ay la wareegi doonaan muhaajiriin sharci darro ah oo aanan Mus limiin ahayn oo ka yimid Bangladesh.
2. Qodobka 370 Kashmir
Gobolka Kashmir ayaa tusaale u noqday rabshadaha uu dhiigga ku daatay ee u dhaxeeya dalalka deriska ah ee Hindiya iyo Pakistan.
Kacdoon muddo dheer soo jiitamayay ayaa ka socday dhanka Hindiya, labada dal ayaana dhowr jeer isku dagaalay gob olka buuralleyda ah ee qurxoon.
Intii ay socotay kala qeybinta Hindiya, sannadkii 1947, dagaal ayaa ka dhex qar xay Hindiya iyo Pakistan, gobolka Kashmir ayaana noqday mid kala qeybsan. Qodobka dastuuriga ah ee loo yaqaanno Article 370, ayaa u oggol aaday gobolka ay Muslimiintu u badan yihiin inuu noqdo ism aamul madax-bannaan.
Sannadkan dhexdiisa, dowladda uu Modi hoggaamiyo ayaa go'aansatay inay baabi'ineyso cutubkaas 370, taasoo sabab tay kacdoon dadweyne.
Maqaamka gaarka ah ee Kashmir ay aa muddo dheer laga doodayay, haddana dowladihii tan ka horreeyay ma jirin mid ku dhiirrata inay gobolka maqaamka kala laabato.
Balse dowladda BJP ayaa la laabatay muddo bilo ah kaddib markii ay doora shada ku guuleysatay. Tallaabadan waxaa xigtay in gebi ahaanba la xiro dooxada Ka shmir, iyadoo muddo bilo ah ay isgaar siinta iyo korontada ka maqan yihiin gob olka.
Dad badan oo reer Kashmir ah, baa bi'inta qodobkaas dastuuriga ah ee 370, wuxuu uga dhigan yahay mid marmarsiyo u ah in gobolka uu yahay qeyb ka mid ah Hindiya, meeshana looga saarayo in Mus limiinta ay u badan yihiin Kashmiir, iyadoo dadka kale ee dalkaas xaq loo siinayo inay meesha degaan ayna hanti ku yee shaan.
Tallaabadan ayaa caro ka dhalisay gudaha baarlamaanka Hindiya, qaar ka mid ah khubarrada sharciga ayaana ku tilmaamay mid weerar ku ah dastuurka. Dacwad ka dhan ah tallaabadan ay qaadd ay dowladda Modi ayaana la geeyay Ma xkamadda ugu Sarreysa dalkaas.
3. Diiwaan-gelinta Qaran ee Muwaaddiniin ta (NRC)
NRC waa diiwaanka dadka deggan go bolka waqooyi-bari ee Hindiya ee Assam, kuwaas oo caddeyn kara inay Hindiya soo galeen kahor 24-tii March, 1971-dii, oo ah maalin kahor markii dalka Bangladesh uu xornimadiisa ka qaatay Pakistan.
Inkastoo NRC la sameeyay sannadkii 1951 (ayna sameysay dowladdii ugu horr eysay ee Hindiya ee si dimuquraadi ah loo doortay ee uu hoggaaminayay xisbiga Congress Party, oo hadda mucaarad ah), hannaanka lagu kala saarayo "muhaajiriinta sharci darrada ah" waxaa muhiimadda koowaad siiyay dowladda Modi.
Qoysaska gobolkaas ku nool ayaa laga doonayaa in ay keenaan dukumentiyo caddeynaya xilligii ay dalkaas yimaadeen, kuwii aan heysanna waxaa loo aqoonsanayaa ajaanib sharci darro ah.
Assam waa mid ka mid ah gobollada ay bulshooyiinka ugu badan ee isku dhafka ah ku nool yihiin, su'aalaha ku saabsan dhalashada iyo aqoonsiga dadkas waxay in muddo ah ka dhex guuxayaan malaayiinka qof ee halkaasi deggan.
Dadka gobolkaas ku nool waxaa ka mid ah Bengali iyo Hindu iyo qabaa'illo kale. Meel ka mid ah saddex-meelood bulshada gobolka, waa Mulsimiin.
Illaa 1.9 milyan oo qof oo gobolkaas ku nool ayaa lagala laabatay dhalashada, inkastoo la siiyay waqti ay racfaan uga qaataan go`aankaas.Xigasho:-BBC
Dhammaan Ilma Reer Maxamed Cigalle,Maxamuud Cigale ,Ro oble Cigale ,Geeddoow Cigale, Madiino Cigale, Muumino Cig alle,Cosobeey Cigalle,Reer Maxamed Jimcaale, Xasan Jimcaale, Xuseen Jimcaale,Muxumud Jimcaale Aamino Jimcaale, Nuurto Jimcaale,Madiino Jimcaale, Dhammaanreer Jimcaale Ciaglle Gadiid Waxaay Tacsi Tiiraanyo Leh U Dirayaan Ilmo Axmed Jim caale Cigale Oo Walaalkood XUSEEN AXMED JIMCAALE CIGALLE Oo Ku Geeri yooday M/Muqdisho Habeenka Sabtiga Soo Galeysay Xilliga Salaad da Cishaha 13-Ka Dicembar 2019-Ka waxayna alle ugu baryayaan inuu naxariistii janno ka waraabiyo Marxuumka ehelka iyo axsaabta uu ka tageyna samir iyo iimaan saadaq ah ka siiyo Aamiin Aamiin Aamiin
Sidoo kale waxay ugu tacsiyadeynayaan Bahda Saxaafadda Soomaaliyeed iyo howl wadeennada Wargeyskaani Maamulka Sare ee wargeyska Marwo Xabiibo Axmed Jimcaale Biibto oo walaalkeed uu ahaa MARXUUMXUSEEN AXMED JIMCAALE CIGALLE Waxayna alle igu baryayaan inuu ka samir siiyo iyada iyo qoyska oo dhan, marxuumkana jannada fardowso ka wara abiyo Aamiin Aamiin
C/RAXMAAN C/SHAKUUR "MUXUU YAHAY XALKA LA ISUGU IMAAN KARO DOORASHADA 2020/21”
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna Gudd oomiyaha Xisbiga Wadajir ayaa ka hadlay dooda adeg ay Maalm ah an Xildhibaanada Golaha Shacabka ka yeelanayan Sharciga Doo rashooyinka qaranka oo ay soo diyaariyeen Guddiga Doorashada ee Baarlamaanka.
War qoraal ah oo bartiisa Facebook uu kusoo qoray C/raxmaan C/Shaku ur ayuu uga hadlay dooda Sharciga Doorashooyinka, kaasi oo u qornaa sidan:
Maalmahan waxay dooddiisu socotaa sharciga doorashooyinka ee uu soo turxaan bixiyey Guddigii uu Baarlamaanku